I-Oval Black Onyx Ring (Isiliva) - Popular Jewelry
I-Ovalx Ring engu-Ovalx (Isiliva)
Indandatho yesiliva enhle kakhulu eyenziwe ngobuso obusawindi i-onyx emnyama maphakathi nobuso bayo.
Insimbi Eliyigugu: Isiliva Eliyingqayizivele
Itshe eliyigugu: IBlack Onyx
Usayizi Wezintambo: 6.75 **
ring Ubude: 24 mm
Ububanzi beRing: 20.5 mm
Ukuhlola ukutholakala kwamanye amasayizi nemiklamo sicela ubuze nge-imeyili noma nge-Instagram DM uma kunesidingo.
** Izindandatho zosayizi ezingashintshwa kuze kukhuphuke ngo-0.25. Xhumana nathi ngaphambi noma ngokushesha ngemuva kokuthenga iringi.
Indandatho emangazayo !!
Kufike njengoba kushiwo! Ngiyabonga !!